Otu esi etinye ma ọ bụ kwalite Nvidia ọkwọ ụgbọ ala na Ubuntu 21.10 Imish Indri - LinuxCapable
October 27, 2021 October 21, 2021 by Jọshụa James
Nhọrọ 2. Wụnye Nvidia Drivers na PPA
Nhọrọ 3. Wụnye Nvidia 495 Beta Drivers
N'ime nkuzi na-esonụ, ị ga-amụta ka esi etinye Nvidia Graphic Drivers site na Nvidia Proprietary Repository, ebe nchekwa PPA, ma ọ bụ jiri aka na-eji beta ọkwọ ụgbọala dịka ọmụmaatụ, si otú a na-enye gị ihe kachasị ọhụrụ na ngwanrọ dị.
Nhọrọ mbụ iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọ ala NVIDIA maka sistemụ arụmọrụ Ubuntu 21.10 gị bụ iji ahịrị iwu. Ndị ọrụ dị elu na-ahọrọ iji iwu dabere na iwu, mana onye mbido nwere ike nweta nke a ngwa ngwa site na ihe ndị a:
Site ihe atụ mmepụta, ị pụrụ ịhụ anyị sistemụ modul bụ "TU117 (GeForce GTX 1650]", na onye ọkwọ ụgbọ ala Nvidia akwadoro bụ "Nvidia-ọkwọ ụgbọala-470". Cheta na nke a bụ naanị ihe atụ. Onye ọ bụla ga-enwe kaadị eserese Nivida dị iche iche. Chọọ maka nhọrọ akwadoro ma ọ bụrụ na enwere otu.
Ọzọ, anyị ga-etinye ihe "Nvidia-ọkwọ ụgbọala-470" ngwugwu ọkwọ ụgbọala. Enwere ike ime nke a n'ụzọ abụọ.
N'aka nke ọzọ, mepee Nvidia X Server graphical UI gị iji kwado ụdị nrụpụta onye ọkwọ ụgbọ ala.
Ka e were ya na ịchọrọ ngwugwu Nvidia ọhụrụ n'ihi na kaadị eserese gị bụ modul ọhụrụ. Ị nweghị ike ịhụ nkwado ọkwọ ụgbọ ala na ebe nchekwa ndabere dị na Ubuntu; tinye Nvidia PPA ndị a, nke na-emelite ebe nchekwa ya ugboro ugboro.
Mepee ọnụ ọnụ gị "CTRL + TLỌ + T" ma wụnye ihe ndị a.
Mara, a na-agụkarị ndị ọkwọ ụgbọ ala ndị a dị ka beta. Wụnye na ihe egwu nke gị. Gbaa mbọ hụ na ị bu ụzọ kwado ihe niile, ebe nke a abụghị ebe nchekwa Ubuntu gọọmentị.
Dịka ị na-ahụ, enwere nkwanye maka ngwugwu ọkwọ ụgbọ ala ịwụnye. Ugbu a, enyere oge nkuzi a, ma na Ubuntu 21.10 ewepụtara, ma nhọrọ 1 na 2 nwere otu ọkwọ ụgbọ ala 470, mana nke a ga-agbanwe n'oge.
Iji wụnye, gbanye ya wụnye akpaaka iwu.
Ozugbo emechara, mechaa nrụnye site na ịmalitegharị PC gị.
N'ime nkuzi a, ị mụtara ka esi etinye ndị ọkwọ ụgbọ ala ọhụrụ ma ọ bụ beta na sistemụ Ubuntu 21.10 Imish Indri gị site na iji nhọrọ kwụsiri ike, nke kachasị ọhụrụ, ma ọ bụ na-agba ọbara.
Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ na Nvidia Drivers maka Ubuntu site na ịga na Ubuntu nchọpụta nsogbu ngalaba.
Categories Ubuntu Tags Nvidia, Ubuntu 21.10 Impish Indri Mail igodo
4 echiche na "Otu esi etinye ma ọ bụ kwalite Nvidia ọkwọ ụgbọala na Ubuntu 21.10 Imish Indri"
October 24, 2021 na 12: 40 pm
Ọ dị nwute, ka ịgbaso ntuziaka 495 jiri nrụnye ọhụrụ, SDDM jụrụ ibido.
October 24, 2021 na 1: 10 pm
Daalụ maka ozi ahụ, mana enwere m mgbagwoju anya. Ọ bụ nrụnye ọhụrụ nke Ubuntu 21.10? Ebe ọ bụ na ọ kwesịrị iji GDM3, ọ bụghị SDDM, a nwalere nke a na usoro Ubuntu 21.10 ọhụrụ, nke kachasị ọhụrụ.
Ị nwere ike ịgbanwe azụ na GDM3 sudo dpkg-reconfigure gdm3
Ọ dị ka ndị njikwa ngosi ndị ọzọ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ ugbu a, ana m ewere ya na ị na-eji gburugburu desktọpụ ọzọ?
October 28, 2021 na 4: 57 am
Ịmalite NVML agaghị ekwe omume: ụdị ọkwọ ụgbọ ala/ọba akwụkwọ adabaghị
October 28, 2021 na 6: 34 am
Ị tinyela ndị ọkwọ ụgbọala Nvidia dị adị? Ọ bụrụ otu a, mgbe ụfọdụ nke a nwere ike ime. Ụzọ kachasị mma bụ iwepụ ndị ọkwọ ụgbọala niile nwere koodu na-esonụ.
sudo apt-nweta autoremove *nvidia* -purge
Mgbe ahụ reboot na malite ọzọ na echichi bụ n'ozuzu ụzọ na Ịmalite NVML agaghị ekwe omume: ụdị ọkwọ ụgbọ ala/ọba akwụkwọ adabaghị.